Fiaiken-keloka – 2trondro
Home / Fiangonana / Ny sakramentan'ny / Fiaiken-keloka
Fiaiken-keloka dia ny asa famoahana ny fahotana iray ho an'Andriamanitra.
Inona avy ireo fahotana?
Voavela ny fahadisoana miady amin'Andriamanitra: faniriana na eritreritra na fihetsika izay mifanohitra amin'ny fomba tiany isika mba hitondra tena. (Araka ny Katolika, Mino isika ny olona manana tsitrapo ny Mihainoa An'Andriamanitra dia manao zavatra mifanaraka aminy, na tsia.)
Ny fahotana mitondra antsika lavitra kokoa avy amin 'Andriamanitra, ary ny fiaiken-keloka, na fankatoavana sy ny fanekena ny fahadisoana, mamela antsika mba hampihavana amin'Andriamanitra.
Ny anjara asan'ny mpisorona
Noho izany, nahoana no Katolika any amin'ny mpisorona mba manana ny famelan-keloka, fa tsy handeha mivantana ho an'Andriamanitra?
Katolika any amin'ny mpisorona mba manana ny famelan-keloka, satria i Jesosy no nanome ny Apôstôly ny fahefana hamela ny fahotana. Ao amin'ny sakramentan'ny Fanekem-pinoana, voavela ny helokao Andriamanitra miasa ny alalan 'ny fitaovana ny mpisorona.
Rehefa maneho antsika ny Filazantsara, Jesosy ny Apôstôly ny fahefana hamela heloka ny harivan'ny Fitsanganany tamin'ny maty, ka nanao taminy, "Fiadanana ho anareo. Tahaka ny nanirahan'ny Ray Ahy, dia toy izany no anirahako anareo kosa " (John 20:21). Avy eo, miaina aminy, Hoy izy, "Raiso ny Fanahy Masina. Raha mamela ny fahotan'ny rehetra, dia voavela; Raha hitana ny fahotan'ny rehetra, izy ireo voatana " (John 20:22-23).
Ny teny hoe "naniraka" - "Tahaka ny nanirahan'ny Ray Ahy, dia toy izany no anirahako anareo kosa "mandona ny midika fa ny fanomezam-pahasoavana izay nomena ny Tompo dia mba hotehirizina ho an'ny mpandraharaha voahosotra (jereo ny Filazantsaran'i Jaona 13:20; 17:18; Ny taratasin'i Paoly ho an'ny Romanina, 10:15; ary ny Filazantsaran'i Matio 28:18-20). Tokony ho marihana ihany koa fa tsy nanome azy ny fahefana hamela ny fahotana, fa ny tsy manaiky hamela heloka ihany koa. Izany no famantarana ny fanomezana bebe kokoa noho ny mpitondra fivavahana ihany satria ho mpanara-dia an'i Jesosy mba hiaro ny famelan-keloka ao amin'ny heviny tsotra dia mamaritra ny fahotana ary ho azy.1
Ny fahefana hamela heloka dia mifandray amin'ny fahefana “fehezinao sy hamaha”, nomena voalohany indrindra ny Saint Peter, ny papa voalohany, fa ny fikasana koa ny Apôstôly amin'ny fitambarany; ary ny herin 'ny fanalahidy, nomena an'i Petera ihany, na dia nozarain'i ny hafa amin'ny lafiny io amin'ny alalan'ny Petera ny fahefan'i (jereo ny Matio 16:18-19; 18:18).2 Ny fahefana hamatotra sy hamaha, ny Sanatria izany! ary fahazoan-dalana, manome ny Apôstôly ny hery manilika anankiray avy tany amin'ilay fiaraha-monina noho ny ota sy ny indray niaiky ny iray amin'ny alalan'ny fibebahana.3
Saint James manambara ny centrality ny mpitondra fivavahana ao amin'ny fombam-pivavahana famelan-keloka ny fahotana ny, nilaza ny hany taratasy:
5:14 Misy eo aminareo marary? Aoka izy hampaka ny loholon 'ny fiangonana, ary aoka ireo hivavaka ho azy, fanosorana azy diloilo amin'ny anaran'ny Tompo;
15 ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ny marary, ary ny Tompo hanangana azy; ary raha nanota, dia havela ny helony.
16 Ary noho izany manaiky ny heloka iray hafa, ary mivavaha ho an'ny iray hafa, mba ho sitrana. Ny fivavaky ny marina dia manana hery lehibe eo ny vokany.
Misy tsy mety milaza ny Kristianina Katolika James 'toromarika hoe "manaiky ny heloka iray hafa" (V. 16) no porofo manohitra ny tsy maintsy hiaiky ny fahotana amin'ny pretra. izany fanambarana, na izany aza, mampiseho fotsiny ny zava-misy fa ao amin'ny Fiangonana tany am-boalohany dia zatra nomena fiaikena eo anatrehan'ny fiangonana.4 Fitanisan-keloka ampahibemaso ireo dia niahy ny mpitondra fivavahana, na izany aza, eo ambany fahefana izay voavela ny helony. James mampiseho izany, mampianatra ny Kristianina mba "hampaka ny loholon'ny (na ny Pretra) 'ny fiangonana, ary aoka ireo hivavaka ho azy " (V. 14). Ny fanamafisana bebe kokoa amin'ny James 5 dia ara-panahy, fa tsy ara-batana fanasitranana; ny Apôstôly dia mampiseho ny fahotana ny olona dia ho expiated amin'ny alalan'ny fanelanelanana ny anti-panahy (V. 15), izay "manana hery lehibe eo ny vokany" (V. 16).
Ny mpisorona dia manana ny fahefana tsy famotsoran-keloka ny mpivalo dia tokony hamantatra ny mpivalo dia efa niaiky ny fahotany tsy mafy orina tanjona ny fanitsiana. ↩
Rehefa nandinika Ott Ludwig, "Ny olona izay manana ny herin 'ny fanalahidy manana ny hery feno ny mamela ny olona hiditra ny Fanjakana' Andriamanitra, na ny manilika azy tsy izany. Fa araka ny fahotana indrindra izay manakantsakana ny fidirana ao amin'ny Fanjakana 'Andriamanitra ao ny tonga lafatra (cf. Efes. 4, 4; 1 Kor. 6, 9 de seq.; Gal. 5, 19 de seq.), ny fahefana hamela ny fahotana dia tsy maintsy ho tafiditra ao ihany koa ny herin 'ny fanalahidy " (Fototry ny foto-pinoana Katolika, Tan Books, 1960, t. 418). ↩
Izany no indrindra Hita avy amin'ny teny manodidina ny Matio 18:18, izay ialohavan'ny Jesosy ny toromarika momba ny fomba mpanota mibebaka dia ho reintegrated indray ao amin'ny valan'Andriamanitra sy ny mpanota tsy mibebaka voaroaka (misy, t. 418). ↩
The Didache, izay Avy amin'ny andron'ny apôstôly, hoy i, "Miaiky ny fandikan-dalàna ao am-piangonana ..." (4:14). avy Origène (D. toy ny. 254) dia mianatra isika fa ny mpino dia nandeha matetika tany amin'ny tsy miankina Confesseur ny voalohany na ny, raha izany nanoro hevitra, niaiky ny fahotany eo anatrehan'ny fiangonana, ka "ny hafa dia mety angamba ho afaka ny ho hery, raha Ianao izany mora kokoa sitrana " (Homilies ny Salamo 2:6).
On Fivalozana-bahoaka, Saint Kaisara ny Arles (D. 542) naneho hevitra, "Azo antoka izay mandray fivalozana ampahibemaso afaka nanao izany mangingina. Fa mihevitra aho fa mahita, fandinihana ny vahoaka amin 'ny fahotany, fa tsy matanjaka ampy hiatrehana ny fahazaran-dratsy lehibe toy izany irery; ary noho izany antony izany dia maniry ny mangataka ny fanampian'ny olona rehetra " (toriteny 67:1). ↩